Mashiinka Kartoonada Shiinaha ee Soo-saarista iyo Soosaarida Waxsoosaarka Dawooyinka | Iswaafajiyay
Kartoon Xawaare Sare, DXH-200 Taxanaha
Mashiinka kartoonka ee alaabada dawooyinka
Kartoonkan xawaaraha sare ku shaqeeya waa mashiin kartoon jiif ah oo ku habboon maaraynta baakadaha khariidadaha, dhalooyinka, tuubbooyinka, saabuunta, fijaannada, kaararka lagu ciyaaro iyo alaabada kale ee dawooyinka, cuntada, warshadaha kiimikada ee maalinlaha ah. Mashiinka kartoonka waxaa lagu gartaa hawlgal deggan, xawaare sare iyo kala duwanaansho ballaadhan.
Accomplish Ku dhammaystirka otomaatigga xaashiyaha xaashiyaha, kartoonka oo istaagaya, galinta alaabada, daabacaadda lambarrada iyo xirmooyinka kartoonka;
Be Waxaa lagu dhejin karaa nidaamka xabagta dhalaalka kulul si loo mariyo xabagta dhalaalka kulul ee lagu dahaadho kartoonka;
Qaadashada xakamaynta PLC iyo qalabka kormeerka sawir qaadaha si looga caawiyo xalinta cilladaha waqtiga ku habboon;
Motor Mashiinka ugu muhiimsan iyo bareega xajinku waxay ku qalabaysan yihiin gudaha mashiinka, qalabka ilaalinta xad dhaafka ah ayaa loo habeeyay si looga hortago in waxyeello soo gaarto haddii ay dhacdo xaalad culeys badan;
Ku qalabaysan yahay qalabka ogaanshaha otomaatigga ah, haddii aysan jirin wax soo saar la ogaanayo, ka dib ma la soo dhejin doono buugyarahan, kartoonna lama rari doono; Haddii badeecad kasta oo cilladaysan (aan lahayn wax soo saar ama buugyarahan) la ogaado, waa la diidi doonaa si loo hubiyo tayada sare ee alaabooyinka la dhammeeyay;
Machine Mashiinka kartoonada ah waxaa loo isticmaali karaa si madax-bannaan ama waxaa loola shaqeyn karaa mashiinka baakadaha wax lagu rido iyo qalab kale si loo sameeyo khad dhammaystiran oo dhammaystiran;
Sizes Qiyaasta kartoonka waa la beddeli karaa si loo daboolo baahiyaha dhabta ah ee loo baahan yahay, oo ku habboon wax soo saar ballaaran oo nooc keliya ah ama wax soo saar dufcad yar oo noocyo kala duwan ah;
Koronto AC380V saddex waji oo shan-silig ah 50 Hz Wadarta awoodda 5kg
Cabbir (L × H × W) (mm) 4070 × 1600 × 1600
Miisaanka (kg) 3100kg
Soo saar Mashiinka ugu weyn: 80-200 kartoon / min Mashiinka isku laabma: 80-200 kartoon / min
Isticmaalka hawada 20m3 / saacad
Kartoon Miisaanka: 250-350g / m2 (waxay kuxirantahay cabirka kartoonka) Cabirka (L × W × H): (70-200) mm × (70-120) mm × (14-70) mm
Warqadda Miisaanka: 50g-70g / m2 60g / m2 (fiicnaan) Cabbirka (furmay) (L × W): (80-260) mm × (90-190) mm Isku laabid: kalabar laab, laba laab, saddex laab, rubuc laab
Heerkulka heerkulka 20 ± 10 ℃
Hawo cufan 0.6MPa Socodka 20m3 / saac
Hore: Mashiinka Kartoonada otomaatiga ah, DXH-130 Taxanaha
Xiga: Mashiinka Calaamadeynta (Dhalada Wareega ah), Taxanaha TAPM-A
Mashiinka Kartoonada Gawaarida
Mashiinka Kartoonada otomaatiga ah
Mashiinka kartoonka Mashiinka
Mashiinka Kartoonada Shiinaha
Mashiinka Kartoonada Iwk
Mashiinka Kartoonada otomatiga ah
Mashiinka Kartoonada toosan